Raveloaritiana Mamisoa · Oktobra 2011 · Global Voices teny Malagasy
Raveloaritiana Mamisoa · Oktobra, 2011
Lahatsoratra farany an'i Raveloaritiana Mamisoa tamin'ny Oktobra, 2011
Global Voices Rosiana Miara-miasa Amin'ny Neweurasia.net
Azia Afovoany sy Kaokazy 30 Oktobra 2011
Faly izahay mampilaza ny fiaraha-miasa ny Global Voices Rosiana miaraka amin'ny Neweurasia.net, iray amin'ireo sehatry ny valantserasera lehibe indrindra ao Azia Afovoany, izay manana mpihaino Anglisy sy Rosiana marobe. Miompana manokana amin'ny vaovao sy fanadihadiana nataon'ny tanora avy ao an-toerana ny Neweurasia. Manazava bebe kokoa ny vaovao tsy voatantara tsara ny...
Frantsa: Famerana Fanomezana Visa Ny Mpianatra Anjerimanontolo Vahiny
Afrika Mainty 28 Oktobra 2011
Raha mba nitovy amin'ny lalàna momba ny fifindra-monina ao Etazonia ny any Frantsa araka izay fanapahan-kevitra noraisina farany, dia orinasa Sinoa no mety tompon'ny Yahoo (naorin'i Jerry Yang avy any Taiwan), ary Google no fantatra ankehitriny fa mety orinasa Rosiana miroborobo indrindra (natsangan'i Sergey Brin) ary Apple dia orinasa Syriana – mpianatra...
Kenya: Domberina An-tSerasera Noho ny Fanafihana Grenady Avy Amin'ny Al Shabaab
Afrika Mainty 27 Oktobra 2011
Nanafika ny vondrona mitam-piadiana Somali Al Shabaab ny tafika keniana vao tsy ela izay ka ny anaran'ny fanafihana dia midika hoe “Operation Linda Nchi” amin'ny teny Swahili na Operation Fiarovana ny Firenena. Nampanatena ny Al Shabaab taorian'ny fanafihana fa hanafika an'i Nairobi. Efa nahitana fanafihana tamin'ny alalan'ny grenady indroa nahafatesana olona...
Pakistana: Sanganehana Tamin'ny Fandraràna ny Google Adsense Ny Bilaogera
Azia Atsimo 27 Oktobra 2011
Nahasanganehana ireo bilaogera Pakistaney ny fandraràna tao amin'ny kaonty google adsense. Trano mpamokatra boky am-polony no lasibatry ny hetsika mikendry famaizana an'ireo tranokala sy bilaogy hosoka. Niteraka fahatezerana teo amin'ireo bilaogera manerana ny firenena izany — niraiki-tapisaka lalina tamin'ny famaizana natao tsy nisy fampilazana mialoha ny fahatezeran'izy ireo, izay fepetra mahazatra...
Ejypta: Manaraka Akaiky ny Fifidianana ao Tonizia
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 25 Oktobra 2011
Ny revolisiona Toniziana no nialoha ny revolisiona Ejypsiana, ary nanomboka tamin'izany, nanintona ny Ejypsiana ny tolona mankany amin'ny demokrasia nataon'i Tonizia. Ary ankehitriny ny Toniziana – na ao an-toerana na ivelan'i Tunisia – miomankomana amin'ny fifidianana ny mpikambana eo anivon'ny antenimieran-dalampanorenana izay hanendry ny governemanta vaovao ary hamolavola ny lalampanorenana vaovao...
Tonizia: Fihetseham-po sy Filaharana Lava dia Lava Tamin'ny Fifidianana
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 24 Oktobra 2011
Voasokitra ao amin'ny tsiaron'ny mpifidy Toniziana, izay nameno ny birao fandatsaham-bato hatry ny vao maraimbe, ny andro androany [alahady]. Nifidy ny antenimieram-panorenana handrafitra ny Lalampanorenan'ny Firenena ny Toniziana. Tsy nahakivy filaharambe rehefa vonona ny hanana izay tiana holazaina amin'ny fomba itondrana ny firenena.
Tontolo Arabo: Mifampiarahaba Amin'ny Fifidianana Ao Tonizia
Nahazo fihobiana tsara avy amin'ny mpiserasera manerana ny tontolo Arabo ny Toniziana, amin'izao fotoana handehanany hifidy ireo mpikambana 218 ao amin'ny antenimieran-dalàm-panorenana izay hisahana ny famolavolana ny lalàm-panorenana ao amin'ny firenena, ary hanendry ny filoha sy ny governemanta vonjimaika. Manan-tantara ny fifidianana satria voalaza ho toy ny ‘fifidianana malalaka voalohany ao...
Tonizia: Fihaonana Amin'ny Tantara
Handeha hifidy ny Antenimieran-dalàmpanorenana ny Toniziana androany, solontena misahana ny famolavolana ny lalàmpanorenana vaovao sy ny fanendrena ny governemanta vaovaon'ny tetezamita. Tamim-kafaliana no nandatsahan'ireo Toniziana rehetra maneran-tany vato tao anaty vata tamin'ity andrana demokratika ao amin'ny firenena ity, izay arahin'ireo Arabo manerantany akaiky. Fotoana talohan'ny fifidianana, naneho ny fihetseham-pony ireo mpamaham-bolongana manoloana ity andro mana-tantara ity....
Kolombià: Namoy ny Ainy Ilay Mpandraharaha Julio Mario Santo Domingo
Amerika Latina 24 Oktobra 2011
Namoy ny ainy tao New York teo amin'ny faha- 87 taonany, ilay mpandraharaha Kolombiana Julio Mario Santo Domingo Pumarejo, tamin'ny 7 Oktobra lasa teo, lehilahy mpanankarena indrindra maneran-tany araka ny tatitra navoakan'ny Forbes izy. Tamin'ny alalan'ny vondron'ny orinasany Bavaria sy ny orinasany Valores, no nitantanany orinasa maherin'ny 100, anisan'izany ny famokarana labiera (brassage), radio,...
Fahatsiarovana ny Rain'ny Fahaleovantena Mozambika, Samora Machel
Afrika Mainty 21 Oktobra 2011
Hankalaza ny faha 25 taona nahafatesan’ ilay rainy mpanangana dia ny Filoha Samora Machel i Mozambika ny 19 Oktobra 2011, namoy ny ainy tamin'ny fianjeran'ny fiaramanidina tao Mbuzini, ao Afrika Atsimo tamin'ny 19 Oktobra 1986 izy. Nanambara ny governemanta fa “Taonan'i Samora Machel” ity taona 2011 ity. Lanonana no nanombohana ny...